12/06/2013 )by freelance journalist bashir Iftiin Xasan Baasto iyo C/naasir Seeraar oo sheegay in dagaalkii Kismaayo uu istaagay Maamulka Raaskaambooni ee Magaalada Kismaayo ayaa sheegay inuu dhamaaday dagaalkii Magaalada Kismaayo ka socday ee udhaxeeyay ciidanka Raaskaambooni iyo kuwa Iftiin Xasan Baasto. C/naasir Seeraar afhayeenka maamulka Axmed Madoobe ee Magaalada Kismaayo ayaa usheegay Idaacada Kulmiye ee Magaalada Muqdisho in xabadii ka socotay Magaalada Kismaayo ay dhamaatay. “Wuu dhamaaday dagaalkii Kismaayo odayaasha Magaalada iyo kuwa qabaa’ilada ayaa soo kala dhexgalay dagaalkii Kismaayo,hadana wuu dhamaaday’Ayuu yiri Seeraar. Iftiin Xasan Baasto oo isagana ah shaqsi sheegta Madaxweynaha maamulka Jubbaland oo dagaalka magaalada Kismaayo kula galay ciidanka Axmed Madoobe ayaa dhankiisa sheegay in dagaalkii Magaalada Kismaayo uu hada istaagay. “Dagaalkii wuu istaagay Odayaasha dhaqanka ayaa waan-waan wada,marka horeba dagaalka ururka manaxayaasha Raaskaambooni ayaa bilaabay oo shacabka dagaal ku bilaabay laakiin hada wuu istaagay dagaalka”Ayuu yiri Iftiin Xasan baasto. Wasiirka Gaashaandhiga Soomaaliya C/xakiin Xaaji Maxamuud Fiqi oo shalay Magaalada Muqdisho dib ugu soo noqday ayaa waxa uu sheegay in dagaalka ka socday Magaalada Kismaayo,Dowladda ay ku guuleesatay inay xabad joojin kala dhexdhigto dhinacyadii dagaalamay. Kismaayo ayaa xaaladeeda shalay iyo maanta waxa ay tahay mid degan iyadoo ciidankii dagaalamay ay kuwada sugan yihiin Magaalada gudaheeda. | http://farayarenews somafarayarenews somalia @xjournalist i teach and speak english arabic ahmaric kiswahili somali and italiano i am a proff. Af languages journalist peace maker chairman of somali youth @xjournalist i teach and speak english arabic ahmaric kiswahili somali and italiano i am a proff. Af languages journalist peace maker chairman of somali youth path finders 12/06/2013 )by freelance journalist bashir Iftiin Xasan Baasto iyo C/naasir Seeraar oo sheegay in dagaalkii Kismaayo uu istaagay Maamulka Raaskaambooni ee Magaalada Kismaayo ayaa sheegay inuu dhamaaday dagaalkii Magaalada Kismaayo ka socday ee udhaxeeyay ciidanka Raaskaambooni iyo kuwa Iftiin Xasan Baasto. C/naasir Seeraar afhayeenka maamulka Axmed Madoobe ee Magaalada Kismaayo ayaa usheegay Idaacada Kulmiye ee Magaalada Muqdisho in xabadii ka socotay Magaalada Kismaayo ay dhamaatay. “Wuu dhamaaday dagaalkii Kismaayo odayaasha Magaalada iyo kuwa qabaa’ilada ayaa soo kala dhexgalay dagaalkii Kismaayo,hadana wuu dhamaaday’Ayuu yiri Seeraar. Iftiin Xasan Baasto oo isagana ah shaqsi sheegta Madaxweynaha maamulka Jubbaland oo dagaalka magaalada Kismaayo kula galay ciidanka Axmed Madoobe ayaa dhankiisa sheegay in dagaalkii Magaalada Kismaayo uu hada istaagay. “Dagaalkii wuu istaagay Odayaasha dhaqanka ayaa waan-waan wada,marka horeba dagaalka ururka manaxayaasha Raaskaambooni ayaa bilaabay oo shacabka dagaal ku bilaabay laakiin hada wuu istaagay dagaalka”Ayuu yiri Iftiin Xasan baasto. Wasiirka Gaashaandhiga Soomaaliya C/xakiin Xaaji Maxamuud Fiqi oo shalay Magaalada Muqdisho dib ugu soo noqday ayaa waxa uu sheegay in dagaalka ka socday Magaalada Kismaayo,Dowladda ay ku guuleesatay inay xabad joojin kala dhexdhigto dhinacyadii dagaalamay. Kismaayo ayaa xaaladeeda shalay iyo maanta waxa ay tahay mid degan iyadoo ciidankii dagaalamay ay kuwada sugan yihiin Magaalada gudaheeda. – http://farayarenews somafarayarenews somalia @xjournalist i teach and speak english arabic ahmaric kiswahili somali and italiano i am a proff. Af languages journalist peace maker chairman of somali youth @xjournalist i teach and speak english arabic ahmaric kiswahili somali and italiano i am a proff. Af languages journalist peace maker chairman of somali youth path finders
12/06/2013 )by freelance journalist bashir Iftiin Xasan Baasto iyo C/naasir Seeraar oo sheegay in dagaalkii Kismaayo uu istaagay Maamulka Raaskaambooni ee Magaalada Kismaayo ayaa sheegay inuu dhamaaday dagaalkii Magaalada Kismaayo ka socday ee udhaxeeyay ciidanka Raaskaambooni iyo kuwa Iftiin Xasan Baasto. C/naasir Seeraar afhayeenka maamulka Axmed Madoobe ee Magaalada Kismaayo ayaa usheegay Idaacada Kulmiye ee Magaalada Muqdisho in xabadii ka socotay Magaalada Kismaayo ay dhamaatay. “Wuu dhamaaday dagaalkii Kismaayo odayaasha Magaalada iyo kuwa qabaa’ilada ayaa soo kala dhexgalay dagaalkii Kismaayo,hadana wuu dhamaaday’Ayuu yiri Seeraar. Iftiin Xasan Baasto oo isagana ah shaqsi sheegta Madaxweynaha maamulka Jubbaland oo dagaalka magaalada Kismaayo kula galay ciidanka Axmed Madoobe ayaa dhankiisa sheegay in dagaalkii Magaalada Kismaayo uu hada istaagay. “Dagaalkii wuu istaagay Odayaasha dhaqanka ayaa waan-waan wada,marka horeba dagaalka ururka manaxayaasha Raaskaambooni ayaa bilaabay oo shacabka dagaal ku bilaabay laakiin hada wuu istaagay dagaalka”Ayuu yiri Iftiin Xasan baasto. Wasiirka Gaashaandhiga Soomaaliya C/xakiin Xaaji Maxamuud Fiqi oo shalay Magaalada Muqdisho dib ugu soo noqday ayaa waxa uu sheegay in dagaalka ka socday Magaalada Kismaayo,Dowladda ay ku guuleesatay inay xabad joojin kala dhexdhigto dhinacyadii dagaalamay. Kismaayo ayaa xaaladeeda shalay iyo maanta waxa ay tahay mid degan iyadoo ciidankii dagaalamay ay kuwada sugan yihiin Magaalada gudaheeda.
June 12, 2013 BASHIR HASHI YUSSUF 3 Comments
→ VIDEO:-Gabdho Soomaaliyeed oo Cabsan iyo dhaqanka xun ee Caruurta Qurbajoogta Somaliyeed”DANYUUSBARRO”!!.
← by bashir tadhase Hub badan uu Wasiirka Arrimaha Gudaha Somalia u diray Kismaayo oo laqabtay (Warbixin xasaasi ah). Afhayeenkii Hore ee Maamulkii ku meel-gaarka Kismaayo C/naasir Seeraar, ayaa waxa uu Eedeymo kulul u jeediyay Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Somalia Md. Cabdi kariim Xuseen Guuleed. Afhayeenka ayaa waxa uu sheegay inay qabteen Hub culus oo uu Wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka ee xukuumada soomaaliya Cabdi kariim Xuseen Guuleed galinaayay Magaallada Kismaayo. Afhayeenka waxa uu Tilmaamay inay gacanta ku dhigeen Hubkaasi dadkii wadayna ay sheegeen inuu usoo dhiibay Wasiirka Arrimaha gudaha oo uu ugu talagalay in lagu hubeeyo Kooxaha kasoo horjeeda Garabka Axmed Madoobe. Sidoo kale, Seeraar, waxa uu sheegay in Wasiirka uu ka qeybqaatay Dagaalkii labada maalin ka socday Kismaayo, waxa uuna Xusay inuu kamid ahaa Mas’uuliyiintii Dagaalka hurineysay. Seerar ayaa waxa uu dhowr mar siyaabo kala duwan u eedeeyay Madaxda Dowladda Somalia, isagoo muujinaayo inuu garabsiinaayo Axmed Madoobe, wallow inta badan Eedeymahaasi ay Dowladda Somalia dhagaha ka fareysato. Wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka ee xukuumada soomaaliya Cabdi kariim Xuseen Guuleed, weli kama uusan hadlin wararka sheegaya in la qabtay Hub uu u diray Magaallada Kismaayo. Ugu dambeyntii, Xukuumadda Somalia ayaa waxa ay horay u cadeysay mowqifkeeda ku aadan dhanka Kismaayo iyadoona cadeysay inaysan aqoonsaneyn Madaxda isku magacaabay Magaallada KIsmaayo oo uu qeybta ka yahay Axmed Madoobe. Xafiiska Shabakada Allbanaadir.
3 thoughts on “12/06/2013 )by freelance journalist bashir Iftiin Xasan Baasto iyo C/naasir Seeraar oo sheegay in dagaalkii Kismaayo uu istaagay Maamulka Raaskaambooni ee Magaalada Kismaayo ayaa sheegay inuu dhamaaday dagaalkii Magaalada Kismaayo ka socday ee udhaxeeyay ciidanka Raaskaambooni iyo kuwa Iftiin Xasan Baasto. C/naasir Seeraar afhayeenka maamulka Axmed Madoobe ee Magaalada Kismaayo ayaa usheegay Idaacada Kulmiye ee Magaalada Muqdisho in xabadii ka socotay Magaalada Kismaayo ay dhamaatay. “Wuu dhamaaday dagaalkii Kismaayo odayaasha Magaalada iyo kuwa qabaa’ilada ayaa soo kala dhexgalay dagaalkii Kismaayo,hadana wuu dhamaaday’Ayuu yiri Seeraar. Iftiin Xasan Baasto oo isagana ah shaqsi sheegta Madaxweynaha maamulka Jubbaland oo dagaalka magaalada Kismaayo kula galay ciidanka Axmed Madoobe ayaa dhankiisa sheegay in dagaalkii Magaalada Kismaayo uu hada istaagay. “Dagaalkii wuu istaagay Odayaasha dhaqanka ayaa waan-waan wada,marka horeba dagaalka ururka manaxayaasha Raaskaambooni ayaa bilaabay oo shacabka dagaal ku bilaabay laakiin hada wuu istaagay dagaalka”Ayuu yiri Iftiin Xasan baasto. Wasiirka Gaashaandhiga Soomaaliya C/xakiin Xaaji Maxamuud Fiqi oo shalay Magaalada Muqdisho dib ugu soo noqday ayaa waxa uu sheegay in dagaalka ka socday Magaalada Kismaayo,Dowladda ay ku guuleesatay inay xabad joojin kala dhexdhigto dhinacyadii dagaalamay. Kismaayo ayaa xaaladeeda shalay iyo maanta waxa ay tahay mid degan iyadoo ciidankii dagaalamay ay kuwada sugan yihiin Magaalada gudaheeda.”
June 12, 2013 at 4:33 am	 Reply
June 12, 2013 at 3:13 pm	 Reply